Brickaville sy Toamasina : matihanina ireo mpiompy tohanan’Ambatovy #canada #sherrit #ambatovy | NewsMada
Brickaville sy Toamasina : matihanina ireo mpiompy tohanan’Ambatovy #canada #sherrit #ambatovy
Manohana ara-teknika sy ara-bola ny tantsaha any amin’ny distrikan’i Brickaville sy Toamasina II ny tetikasa Ambatovy, avy amin’ny Tetikasa sosialy sy fotodrafitrasa. Voakasik’izany ny tetikasa Harenasoa, mifototra amin’ny fiompiana akoho fakana nofo, ivondronan’ny tantsaha anaty fikambanana efatra (Fmafna Ampasimadinika, Taratra Antsampanana, Fimabri Brfickaville, Mpimdia Ambinaninony Toamasina II). Miara-miasa amin’ny mpiompy efa matihanina izy ireo hahazoana vokatra tsara sy manaram-penitra ary hahaleontena kokoa. Nisy kaoperativa iray natsangana hahafahana mampihena ny masonkarena sy hampiakarana ny vokatra sy ny vola miditra.
Mampidi-bola hafa ankoatra ny fiompiana
Nahalafo akoho maherin’ny 8.000 ireo mpiompy ireo ny volana jona 2016 teo. Hanatsarana hatrany ny fahaiza-manao, nanohana ny fampiofanana amin’ny fandrindrana ny fotoam-piompiana, ny fanamboarana zezim-pahitra (compost), ny fambolena legioma, niampy fitsidihana toeram-piompiana hafa tany Analamanga (Mahitsysy Bevalala) ny Tetikasa Ambatovy. Anisan’ny niompanana manokana ny fampiasana ny zezim-pahitra amin’ny fambolena legioma sy ny voly hafa.
Afa-po tokoa ireo tantsaha ary tena tsapan’izy ireo ny maha samy hafa ny fanao mahazatra sy ny manaraka ny fenitra teknika sy ny fandrindrana ara-pitantanana. Azo antoka fa tsy hitsaha-mitombo ny vokatra sady misy rahateo ny tombombarotra azo amin’ny alalan’ny fambolena, vokatry ny fampiasana ny zezim-pahitra.